Wasiirka Haweenka iyo Wafdi ay hogaaminayso oo u amba baxay dalka Britain |
Wasiirka Haweenka iyo Wafdi ay hogaaminayso oo u amba baxay dalka Britain
Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquul Insaanka ee Xukuumadda Soomaaliya Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye iyo wafdi ay hogaamineyso ayaa maanta u amba baxay dalka Ingiriiska si ay uga qeyb galaan kulan balaaran oo lagu qaban doono dalkaasi.
Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa socdaalka ay ugu amba baxday dalka Britain waxa ay kaga qeyb galaysaa shir looga hadlayo xadgudubyada lagula kaco haweenka, waxaana ay hogaaminaysaa wafdi ka socda Maamullada ka jira Gobollada dalka iyo bulshada rayidka.
“Waxa uu safarkaan ku wajahanyahay cariga Ingiriiska, wefdiga Wasaaradada Haweenka ayaa hogaamineyso, waxaa kaloo ku jira qaar ka mid ah Wasaaradaha Xukuumadda, Wasiirada Haweenka ee Maamulada Galmudug iyo Jubba waa wafdi balaaran, sidoo kale bulshada rayidka ayaa qeyb ka ah Wafdi, waxaana shirka looga hadlayaa xadgudubyada haweenka loo geysto gaar ahaan kufsiga” ayay tiri Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye.
Wasiirka Wasaaradda Haweenka ayaa xustay in shirka uu dabo socda shir lagu qabtay Muqdisho oo uu shir guddoomiyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah Soomaaliya Mudane Xasan ayna ka qeyb galeen mas’uuliyiin ka socotay Qaramada Midoobay, kaasi oo ku saabsanaa dhowridda xuquul insaanka, waxaana ay intaa ku dartay in Shirka Ingiriiska lagu qabanayo uu ahmiyad weyn ugu fadhiyo Soomaaliya.
Wasaaradda Haweenka iyo horumarinta Xuquuqda Aadanaha ayaa dadaal ugu jirta sida looga hortagi karo xadgudubyada loo geysanayo haweenka Soomaaliyeed, waxaana shirkaasi ka qeyb galaya in ka badan 100 dal